China Chain elihambayo ifektri abakhiqizi | I-Yuantuo
Ukuhanjiswa kwepuleti leketanga ukufaka izingxenye zepuleti phakathi kwamaketanga ezinhlangothini zombili zokuhambisa ipuleti leketanga, ukuhambisa izimpahla ezingajwayelekile. Isendlalelo esikhethekile sifakwe ku-plate chain. Ngokuya ngezidingo zokulawulwa kwezimboni, ingasetshenziswa njengomugqa womhlangano, futhi ingabona ukugoba okuhambisa. Imingcele emikhulu yezobuchwepheshe yokuhanjiswa kwamaketanga: 1. I-pitch pitch: I-standard conveyor chain 2. Ububanzi bepuleti chain: 200-1200mm 3. Idlulisa isivinini: 0.5m / min-15m / min 4. Conveyi ...
Ukuhanjiswa kwepuleti leketanga ukufaka izingxenye zepuleti phakathi kwamaketanga ezinhlangothini zombili zokuhambisa ipuleti leketanga, ukuhambisa izimpahla ezingajwayelekile. Isendlalelo esikhethekile sifakwe ku-plate chain. Ngokuya ngezidingo zokulawulwa kwezimboni, ingasetshenziswa njengomugqa womhlangano, futhi ingabona ukugoba okuhambisa.
Main nemingcele lobuchwepheshe of chain elihambayo:
1. Iphimbo le-Chain: I-standard conveyor chain
2.Ububanzi bepuleti chain: 200-1200mm
3. Idlulisa isivinini: 0.5m / min-15m / min
4.Ukuveza umthamo: 2500kg / M
5. Ukushisa okusebenzayo kwensimbi ehambisa uchungechunge lwamapuleti: - 20 ℃ - 400 ℃
Uhlaka lwe-chain plate elihambayo ikakhulu lwenziwe nge-carbon steel noma insimbi engagqwali, futhi izingxenye zepuleti leketanga zenziwe ngezinto ezihlukile.
I-stainless steel chain plate conveyor uhlobo lwedivayisi yokudlulisa enepuleti elijwayelekile le-chain njengendawo yokuthwala kanye ne-motor reducer njengokudluliswa kwamandla. Ukuhanjiswa kwepuleti leketanga kwenziwa yidivayisi yamandla (imoto), ishaft yokudlulisa, i-roller, idivaysi yokuphikisa, i-sprocket, iketanga, ukuthwala, i-lubricant, ipuleti leketanga, njll. Izingxenye ezimbili eziyinhloko zokudlulisa impahla yezilwane yilezi: chain, enikeza amandla okudonsa ngokunyakaza kwayo okuyindilinga; ipuleti lensimbi, eliyisiphathi kunqubo yokudlulisa. Amapuleti amaketanga emigqa eminingi angasetshenziswa ngokufana ukwenza ukuhambisa kwepuleti leketango kubanzi futhi kwakhe isivinini sokwehluka. Ngokusebenzisa umehluko wejubane wamapuleti amarowu amaningi, ukuhanjiswa kwemigqa eminingi kungashintshwa kube ukuhanjiswa komugqa owodwa ngaphandle kokukhishwa, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zomugqa owodwa wokudlulisa amalebula esiphuzo, ukugcwalisa, ukuhlanza neminye imishini. Singenza ikhanda nomsila wezinto ezimbili zokuhambisa amapuleti zibe iketanga elixubene elixubene, ukuze umzimba webhodlela (unga) uhlukaniswe Esimweni sokuguquka okunamandla, ayikho into esele kulayini wokuhambisa, ongahlangabezana nezidingo webhodlela elingenalutho, ingcindezi yebhodlela ephelele futhi akukho ngcindezi ehambisanayo.
Langaphambilini ibhande elihambayo
Olandelayo: elihambayo ijika
Ibhande Lokuhambisa Ugesi
I-Belt Conveyor ethambekele
ILineshaft Roller Conveyor
Iselula elihambayo Belt